Waa maxay sababta uu ninka Sweden ugu taajirsan u xirto dharka huudheyda? - iftineducation.com
aadan21 / March 13, 2016
iftineducation.com – Ingvar Kamprad oo ah ninka iska leh dukaanka IKEA isla markaana ah qofka ugu taajirsay Sweden ayaa qirtay in uu xirto dharka huudheyda ah si uu lacagta u dhaqaalaysto. Ingvar ayaa wareysi uu siiyay barnaamij laga diyaariyay noloshiisa oo ka baxaya telefishinka TV4 ayuu sheegay in dhamaan dharkiisa uu ka iibsado dukaamada huudheyda.
Ingvar oo bishaan 90-sano buuxinaya ayaa intaasi ku daray in sababta ay IKEA ku gaadhay horumarka weyn ay tahay dabeecadiisa dhaqaalo keydinta. Dhaqaalaha Ingvar Kamprad ayaa lagu qiyaasaa ‎€65.5billion oo Euro balse ma cada in lacagtaasi ay tiisa tahay oo keliya iyo tan shirkadiisa, isagoo hadda liiska dadka aduunka ugu dhaqaalaha badan kaga jira 11-aad. Ninkaan ayaa xitaa sheegay in uu timaha ku jarto lacag ka yar 20-dollar.
Ingvar Kamprad ayaa aasaasay dukaanka IKEA 1943 isaga oo 17 sano jir ah. Maanta ayaa shirkada ay IKEA tahay mid aduunka laga wada yaqaano oo wadamo badan ku leh dukaamo waaweyn.
xaliimo rag badan hurdada u diiday daawo
baashaalka laba gabdho oo isku baashaalayo galmo bishimaha iska dhuuqaayo qarxis